မူလနရော » Oita
Updated: 2015-06-23 15:59
Updated: 2015-06-23 13:49
ဘက်ပုရိုးရာဝါးယက်လုပ်ငန်းစင်တာဟာ လူနဲ့ဝါးရဲ့ဆက်စပ်မှုအဓိပ္ဗါယ်ကိုပြခန်းသဘောလုပ်ထားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ပုရဲ့ရိုးရာလက်မှူဝါးလုပ်ငန်းကိုလွယ်ကူစွာနားလည်နိုင်ရန် စာကြည့်တိုက်၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမျာ...
Updated: 2015-06-23 13:15
"ယုနို့ဆုဘို"ဟာယုဖုအင်းဘူတာအနီးရှိလမ်းဖြစ်ပြီး အဲဒိုးခေတ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖော်ပြနေပါတယ်။ ယုဖုအင်းနဲ့အိုအိတရဲ့ ဒေသထွက်ကုန်၊ အစားအစာ၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချနေသော ဈေးဆိုင်အများအပြားကို...
Updated: 2015-06-23 11:53
ခရူးရူး ယုဖုအင်း မင်းဂဲမုရ (ရိုးရာလက်မှုကျေးရွာ)
ခရူးရူး ယုဖုအင်း မင်းဂဲမုရ (ရိုးရာလက်မှုကျေးရွာ)ဟာ ယုဖုအင်းဘူတာမှ ၁၅မိနစ်လမ်းလျှောက်သွားရသောနေရာတွင် တည်ရှိပြီး အိမ်အဟောင်းများအစီအရီရှိနေပါတယ်။ ထို့ပြင် ဖန်လုပ်ငန်း၊ ဆေးဆိုးပန်းရိုက်လုပ်ငန်းမျာ...
Updated: 2015-06-23 10:09
Updated: 2015-06-17 15:27
ဆုရုမိတောင်နှင့်ယုဖုတောင်ကြားရှိယုဖုမြစ်အထက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသော ယုဖုခ၀လျှိုဟာ၁၅မှ၆၀မီတာအနက်ရှိပြီး ၁၂ကီလိုမီတာရှည်လျားပါတယ်။ လျှိုတစ်လျှောက်တွင်ရေတံခွန်၄၀ကျော်ရှိပြီး သဘာဝအလှတရားကိုခ...
Updated: 2015-06-17 14:50
၁၀.၈၅ဟက်တာအကျယ်အ၀န်းရှိသောပန်းခြံတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်ကောင်းသောနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်းအပင်တွေလည်းလေ့လာနိုင်ပြီး အမျိုးအစား ၁၄၀နဲ့ ၂၃၀၀၀လောက်အပင်တွေရှိပြီ...
Updated: 2015-06-17 13:51
ယုဖုဒကဲတောင်တန်းဟာရေပူစမ်းကြောင့်ထင်ရှားတဲ့ ဘက်ပုယုဖုအင်းဒေသတွင်တည်ရှိပါတယ်။ ဘက်ပုရဲ့မျက်နှာစာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁၅၈၃မီတာအမြင့်ရှိပြီး အရှေ့ဘက်နဲ့အနောက်ဘက် တစ်ဘက်စီတွင် တောင်ထိပ်နှစ်ခုရှိပါတယ်။ ထိ...
Updated: 2015-06-17 13:21
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း၇၀၀ကျော်က သူတော်စင်တစ်ဦးက ခရူးရှူးသို့လာရောက်စဉ်ကပထမဆုံးသွားရောက်ခဲ့သောကြောင့် သူတော်စင်ရပ်တော်မူခဲ့ရာပန်းခြံ (ခ) ရှောနင်းဂါးဟားမား ပန်းခြံဟုခေါ်တွင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြို့တွင်းရှိပင်...
Updated: 2015-06-17 13:02
ယုဖုအင်းဘူတာမှ မြင်းလှည်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းလှပသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလှကို ခံစားရင်း ယုဖုတောင်တန်းတစ်လျှောက်ကိုလည်ပတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခေါက် ၅၀မိနစ် ရောက်ရှိနိုင်သော နေရာများ :...